Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany Italia » Fizahan-tany Arabia Saodita amin'ny iraka manan-danja any Italia
Associations News • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Vaovao farany Italia • Vaovao momba ny indostria fihaonana • fivoriana • Vaovao • Vaovao Mafana Arabia Saodita • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia
Arabia Saodita, firenena mpiara-miasa ofisialy ho an'ny TTG
Saodita, ilay trano tena izy any Arabia, dia voamarina ho firenena mpiara-miasa ofisialin'ny TTG Travel Experience 2021, nanamafy ny fisiany ho toerana fizahan-tany lehibe eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Ny hetsika Italian Exhibition Group dia hatao ao amin'ny Rimini Expo Center (Italia) ny faha-13 ka hatramin'ny 15 Oktobra ary izy no tsena italiana lehibe indrindra ho an'ny indostrian'ny fizahantany, sehatra iray lehibe amin'ny famporisihana ny famatsiana sy ny fangatahana amin'ny sehatra manerantany.
Manomboka amin'ny 13-15 Oktobra amin'ity taona ity, firenena 23 no handray anjara amin'ny TTG Travel Experience ao amin'ny Rimini Expo Center.
Ny hetsika, ny karazany voalohany hatramin'ny nanidiana ny asany tamin'ny taon-dasa, dia midika fahatokisan-tena lehibe amin'ny famoahana indray ny sehatra lehibe.
Ny manampahefana momba ny fizahan-tany Saodiana dia mifantoka amin'ny fampiroboroboana fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny varotra manerana izao tontolo izao mba hanitarana ny tratry ny fizahan-tany fizahan-tany.
Hihaona amin'ny firenena 20 mahery ny hetsika The World fizarana misy an'i Saudi, Qatar, Morocco, Tunisia, Japan, Thailand, Philippines, Cuba, Colombia, Jordania, Maldives, Seychelles, ary, ho an'i Eropa, Slovenia, Croatia, Greece, Norway, Poland, Belgique, Austria, Malta, Ireland, ary Sipra.
“Rehefa manohy manokatra sy miverina soa aman-tsara izao tontolo izao, ny fandraisantsika anjara amin'ny TTG Travel Experience dia mifanaraka amin'ny paikadintsika iraisam-pirenena hanome aingam-panahy, hirotsaka ary hiova fo, hitondra ny fiainana ny fanomezana isan-karazany ny saodiana, ny vakoka misy ny kilasy eran'izao tontolo izao, ary tena izy Fandraisana vahiny arabo, ”hoy i Fahd Hamidaddin, Lehiben'ny Executive Executive ao amin'ny Saudi Tourism Authority (STA)
Fahd Hamidaddin, Lehiben'ny Executive Executive an'ny Saudi Tourism Authority
Ny STA dia tompon'andraikitra amin'ny fampahafantarana ny Saodita ho toerana fizahan-tany. Ny fikambanana dia mifantoka amin'ny fampiroboroboana ny fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny varotra dia eran'izao tontolo izao, mba hanitarana ny tratry ny fizahan-tany fizahan-tany saodiana ary handroahana ny fivarotana amin'ny tsena loharanom-baovao.
"Saudi dia manana tranokala manan-karena hananan'ny mpandeha traikefa, ny Ranomasina Mena tsy misy fangarony, ny rahona arabo mahatalanjona, ireo toerana manan-karena ara-kolontsaina sy lova ary ny filaharana manolotra fialamboly", hoy Andriamatoa Hamidaddin. “Misokatra izao ny sisin-taninay, manantena ny handray ireo mpitsidika iraisam-pirenena amin'ny fo malalaka sy ny saina malalaka izahay.”
“Voninahitra ho anay ny fandraisana anjaran'i Saodita amin'ny maha-firenena mpiara-miasa TTG anay. Ny fandraisan'anjaran'ny firenena 23 dia manamafy ny sandan'ny tsena iraisam-pirenena ananantsika ny hetsika ho an'ny orinasam-pizahan-tany italianina voalamina Italiana ary ny mety ho mpividy vahiny. Amin'ireo teboka efatra amin'ireo kardinaly eran'izao tontolo izao, manomboka any Irlandy ka hatrany Seychelles, hatrany Cuba ka hatrany Japon, ho an'ny hetsika IEG andiany 2021, ny fahatokisana no tena mpamily ny indostrian'ny fizahantany iraisam-pirenena, ”hoy i Corrado Peraboni, CEO an'ny Italian Exhibition Group.
Lohahevitra lehibe amin'ny hetsika amin'ity taona ity tany Italia is Matokia. Ity lohahevitra ity dia mametraka ny fifamatorana marina eo amin'ny sehatry ny foibem-pitokisana ary mangataka antsika hieritreritra ny fomba hikarohan'ny mpanjifa ankehitriny ny vokatra izay manome antoka indrindra ny filaminana sy ny fiadanam-po. Avy amin'ny orinasa, noho izany, izahay dia manantena ny fangorahana, fanomezan-toky ary akaiky, miaraka amin'ny fanoloran-tena matanjaka, izay mahita ny indostrian'ny fizahan-tany sy ny fandraisam-bahiny ho lohalaharana.
Ity andro vaovao ao amin'ny UNWTO ity dia dingana goavana ho an'ny dia...